Budata TakeMeasure APK maka Android
Free Budata maka Android (2.90 MB)
Site na ngwa TakeMeasure, ị nwere ike rụpụta ogologo na nha nha site na foto ị na-ese na ngwaọrụ gam akporo gị.
Nụzọ bụ isi, TakeMeasure, nke anyị nwere ike ịkpọ ngwa nha nha foto, ga-enye nsonaazụ doro anya mgbe ejiri ya dịka ntuziaka maka ojiji. Site na iji akwụkwọ A4 dị ka ụgbọ elu ntụaka noge ịse foto, ị nwere ike nweta nsonaazụ doro anya gbasara akụkụ ihe ndị ị na-achọ nha.
Iji kọwaa ojiji nke ngwa ngwa ngwa; Anyị na-etinye akwụkwọ A4 na mpaghara ebe ị ga-ese foto wee see foto site na ịpị bọtịnụ igwefoto na ngwa ahụ. Iji taabụ ntụaka, anyị na-akara akwụkwọ A4 na mpaghara ahụ kpọmkwem ma metụ bọtịnụ nkwenye ahụ aka. Nikpeazụ, ị nwere ike tụọ ihe ọ bụla ị nwere ike iche maka ya site na Measure tab.
Ọ bụrụ na ịmaghị nke ọma iji ngwa a, ị nwere ike ịghọta usoro ojiji nke ngwa ahụ maka vidiyo nkwado dị nokpuru.
Nha faịlụ: 2.90 MB
Mmepụta: Pressburg Associates